Ushwankathelo wenyanga ye-PIVX : Meyi 2018 | PIVX
Kunzima ukuqhubeka kunye neendawo ezininzi ezihambayo zentlangano egunyazisiweyo, ngokukodwa ngokufikelela kwehlabathi njengePIVX. LoMeyi wawungumyanga oxakeke kakhulu kwi-PIVX, kunye neendaba ezivela kwimpumelelo yokuqala yezobugcisa kwizahlulo ezahlukileyo zoluhlu.
Ukuhlaziywa kwe-PIVX enkulu ye-Wallet v3.1.0.2 yinkwenkwezi yenyanga, kwaye unyaka … ukude! Nangona kucacile ukuba olu hlaziyo luye lwaqalisa ixesha elitsha lobubungqina bokuba yingcambu, kwaye kwazisa i-crypto yoluntu kwiintlobo eziphuculweyo ezivela kwizinto ezilula ukuya eziphambili.
Ukuphawula iinguqulelo zePIVX Core Wallet v3.1.0.2 ziquka:
I-GUI yokuHlulwa kweeWallet
Khubaza i-Automint Feature / Setha Inani
Ezi zimbalwa zongqinisiso zesikhwama, jonga amanqaku okukhulula e-GitHub: https://github.com/PIVX-Project/PIVX/blob/3.1/doc/release-notes.md
Phakathi kwezakhono ezihlukeneyo kunye neyokuqala-mboni, i-PIVX yakhiqiza iividiyo ezili-12 ngoMeyi, nganye iguqulelwe kwiilwimi ezininzi. Ukuzibophezela ekudaleni umxholo wemfundo ye-PIVX kunye neophytes kubonisa umzamo wePIVX oqhubekayo wokufundisa uluntu jikelele lwe-cryptocurrency.
ISaziso sika’DYK’ se-PIVX seVideos
I-PIVX yazisa uluhlu lwesithathu lokutshintshiselwa ngo-Meyi, ngasinye sinokuphakanyiswa kwexabiso elikhethekileyo kunye nesiseko sabameli.
Omnye obalaseleyo uludwe lweenkonzo kule nyanga luphuculise isikhundla sePIVX kwiBitscoin, utshintshi lwe-asethi yaseKorea.
Ukongeza kwimihlangano emininzi yemimandla, i-PIVX ithathe inxaxheba kwi-Consensus 2018 kunye neNkomfa ye-Chainges 2018 ngoMeyi.
I-PIVX yaqhubeka yokongeza abathengisi abatsha kwirejista yayo ngoMeyi kwaye ithuthukise isixhobo sendawo yePIVX indawo.
Iziqendu eziliqela ze-PIVX yoluntu zakha umxholo owenziwe ngamagagasi kule nyanga, kubandakanywa nenjongo yemfihlo yobunini bemali, i-WhyPIVX yemfundo? iwebhusayithi, kunye nesingeniso kwi-PIVX.
Kwakuyinyanga ekhuselekileyo ye-PIVX, makhe sibone oko kulandelwa ngoJuni ka-2018!